Ihe ntanetị Web nke ga-echekwa gị oge na ntinye data - Semalt Tips
Ma ị na-emepụta saịtị nke gị, gbalịsie ike ịgbakwunye ndụ ntanetị data na ngwa gị, ma ọ bụ nanị ịchọrọ ịpụpụta data maka nchọpụta, ụfọdụ ndị a ma ama ngwaọrụ scraping nwere ike ịchekwa ọtụtụ oge ma nwee ike ime ka anyị mara. Ọ bụ ya mere anyị ji tụlee ngwá ọrụ weebụ nke kachasị ike ma dị mma nke ga-eme ka oge gị na ume gị dị ike.
Uipath bụ ọkachamara na ịmepụta ngwa ọrụ akpaaka dị iche iche dị ka ncha ihu na ihe ntanetị weebụ maka ma web ma desktọọpụ. Upath web scraper aghọwo ezigbo ihe ngwọta zuru oke maka ndị na-abụghị programmers na ndị na-abụghị coders - commercial real estate appraisal types. Ọ nwere ike mfe karịa ihe mgbagwoju weebụ weebụ nke nhichapụ data, dị ka nchịkọta peeji nke, nchịkọta egwu, na PDF faịlụ ncha. Naanị ịkwesịrị ịmeghe ọkachamara nyocha data ya ma mee ka ịchọta ozi ịchọrọ wepụ. Kwe ka ngwá ọrụ a rụọ ọrụ ya n'ime oge a kara aka, ihe mmepụta ahụ ga-abụkwa nnukwu ihe. N'oge na-adịghị anya ị ga-enweta CSV na Excel akwụkwọ kwesịrị ekwesị. Site n'usoro ihe omume a, ị ga-enwe ike ịmepụta ụdị na-ejuputa na igodo. Ka m kwuo ebe a na nsonaazụ ya n'efu na-abịa na njirimara ezughi oke, mana ụdị nsụgharị dị oke ọnụ dị oke ọnụ, ọ gaghị adakwara ndị nwe ụlọ nchịkọta ma ọ bụ webmasters.
Bubata..ọ na-enye anyị ngwa ngwa desktọpụ n'efu ma na-enye aka wepu data site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ibe weebụ. Ọrụ a na-eme ka ibe weebụ niile dị ka ebe nwere ike ịnweta data na site na API maka ndị ọrụ ya. Ọ bụrụ na etinyere akwụkwọ ahụ ị rubere na mbụ, ị ga-enweta API ozugbo. Ma ọ bụghị ya, Import.io nwere ike iduzi anyị site na usoro nke ịmepụta matriks na-enyere anyị aka site na enyemaka nke ndị njikọ na extractors n'ime awa 20. Ọrụ a dị ịtụnanya ma dị mfe iji, ọ dịghịkwa mkpa ọ bụla ịzụ ọrụ ọ bụla. Otú ọ dị, Import.io apụghị ịnyagharịa site n'otu ibe weebụ gaa na onye ọzọ na-enwe otu pịa. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-ewe ụbọchị abụọ iji nyefee akụkọ gị.
Kimono bụ otu a ma ama na otu n'ime ihe nchọgharị weebụ kacha mma iji chekwaa oge gị na ntinye data. Usoro mmemme a ma ama n'etiti ndị mmepe na mmemme na-achọ inye ike ngwaahịa ha na enweghị koodu ọ bụla. Ọ ga-azoputa oge gị ka ị nwere ike inye ma ihe atụ magburu onwe ya nke ọzụzụ ngwá ọrụ a. Ọzọkwa, e kere API maka ibe weebụ nke ọchịchọ gị ma nwee ike ịdebanye data ahụ n'ụdị ọ bụla. Kimono na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma dịkwa mma maka ịchọta data banyere ahịa ngwaahịa na akwụkwọ akụkọ. O di nwute, enweghi uzo ogugu akwukwo, anyi ga eweputa oge iji zuta ngwá ọrụ a tupu ya eweputa data ziri ezi nye gi.
4. Ihuenyo ihuenyo: